कैलाशको कुटी: 7/1/08 - 8/1/08
नयाँ बानेश्वर चोकनेर, विहानको ६ बजे ट्याक्सीको पर्खाईमा थिई निशा। एयरपोर्ट जानको लागि। पेट्रोलको अभावको बेलामा १५० भन्दा घटीमा जाँदै नजाने चालकको अडानलाई स्वीकार्दै हुइँकिई ट्याक्सी चढेरै। उ प्लेन चढेर कतै जान लागेकी थिइन। १० केजी तौलको एक बण्डल पत्रिकालाई जसरी पनि बाहिर पठाउनुपर्ने उसको काम थियो। एउटा एयरलाइन्सको काउन्टरमा एकजना मान्छेलाई छाडीदिँदा काम फत्ते हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो। किनकी उसलाई त्यसै भनिएको थियो।
एयरलाइन्सको बाहिरीपट्टीको सानो प्वालबाट भेट्नुपर्ने मान्छेलाई सोधिन्। खै सौभाग्य नै भन्नुपर्ला, भेट्नुपर्ने मान्छे त लुक्लातिर पो गएका रहेछन्। अब के गर्ने? खल्तीबाट मोबाइल निकालेर नम्बर डायल गरिन् सामानको मालिकलाई। 'कार्गो गरेर पठाइदिनु न' भन्ने सुझाब पाएपछि सोधखोज गरिन्। 'पास काट्नुस् त्यहाँ गएर'। एक हातमा ह्याण्ड ब्याग अर्कोमा सामानको बण्डल बोकेर खुरुखुरु त्यतै गई निशा। 'चिठ्ठी छ अफिसको?' पास काट्ने काउन्टरबाट प्रश्न आयो। 'छैन'। 'त्यसो भा यहाँबाट पास दिन मिल्दैन' प्रष्टसँग जवाफ पाई उसले। अब झमेला शुरु भयो। केही बेरको कुराकानीपछि भित्र छिरिन्। सोझै एउटा (प्रा‌लि)‌ एयरलाइन्सको काउन्टरमा गएर फेरी सोधिन्। सामान जोखिन्। १०० रु. प्रतिकेजीको दरले हजार तिर्नुपर्ने भो। एकछिन अल्मलिई निशा। किनकी उसलाई पैसा लाग्दैन भनिएको थियो, लागीहालेमा पनि २६ रु. प्रतिकेजी पर्ला भनिएको थियो। 'महिनैपिच्छे २६ रु.को दरले पठाउँदै आइएको सामान कसरी १०० भो?' निशाको प्रश्नमा '२६ मा त कहिले पनि पठाइएकै छैन, पठाउने हो भने त्यत्ति नै हो अरु तपाईको विचार' भन्ने जवाफ पाइन्।
फेरी मोबाइल उठाएर डायल गरिन् 'अब के गर्नु?', '१०० रुपे केजी त खै हौ...' उतापनि अल्मल्ल परेझै जवाफ आयो। एकैछिनमा 'आर्को सरकारी एयरलाइन्सको काउन्टरमा दिइराख्नुस् न त अब, अरु उपाय केही भएन अहिलेलाई', ल्याएको सामान के फिर्ता गर्नु फेरी पनि आफैले ल्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने सोचेर 'हुन्छ' भन्दै सामान उठाएर अर्को काउन्टरतिर लागिन्।
'excuse me, सामान कार्गो गर्नुपर्ने थियो', ३,४ जना भलाद्मीहरु काउन्टरमा चिया खाँदै थिए। 'उहाँलाई भन्नुस्', छेउको मान्छेले कुनातिर बसेको मान्छेतिर देखायो। 'के भो?', निशा छेउमा पुग्न नपाउँदै प्रश्न आयो। फेरी उही कुरा दोहोर्याई निशाले। 'के नामको पत्रिका?', नाम सुनेपछि 'पहिलोचोटि निकालेको हो? अनि हामीलाई खै त?', टेबुलमा छरिएको राष्ट्रिय दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका देखाउँदै 'ई हामीलाई यसरी पत्रिका दिनुपर्छ'। गोट्टागन्ती एक-एक जनालाई पत्रिका भाग लगाउँदै 'खै हामीले हेर्नुपर्दैन कस्तो पत्रिका हो भनेर'। 'प्याक गरेको पत्रिकालाई खोलेर दिउँ त?' पर्दैन भन्ने संकेत पाएपछि 'मैले के गर्नुपर्छ' भन्दै निशा हतारिई। तर कसैले केही वास्ता गरेनन्। एकजनाले अर्कोलाई देखायो। अर्कोले फेरी अर्कोलाई। त्यत्तिकैमा 'यो प्याक गरेको भएन, यसरी पठाउन मिल्दैन' भन्दै एकजना चर्को स्वरमा बोल्यो। निशाले आफूसँग उपाय नभएको बताइन्। प्लाष्टिकले बेरेर नाइलनको डोरीले बाँधेको पत्रिकाको बण्डललाई हेरेर केहीछिन त्यो मान्छे गायब भयो। फेरी देखा पर्यो उही कुरा लिएर। केहीछिनपछि 'ए बैनी वहाँ हाकिम हुनुहुन्छ नि उहाँलाई गएर भन्नुस्' भन्दै अर्को कोठामा पत्रिका हेर्दै गरेका अर्को मान्छेलाई देखाउँदै 'नमस्कार हजुर मेरो यस्तो छ भनेर भन्नुस्'।
'तपाईको सामान बाटैमा फुटेर केही होला अनि तपाईलाई नै मार पर्ला भनेर हो' भन्दै ठूलो स्वरमा बोल्दै थियो। सामुन्नेको टेबलमा बसेको अर्को मान्छेले पत्रिका रहेछ त्यत्तिको हुन्छ भनेपछि निशा त्यहाँबाट बाहिरियो । अघि निस्केर हिडेकै कोठामा छिर्दै 'हुन्छ रे, अब त बिल काटीदिनुहुन्छ होला नि?'। तैपनि निशाको कुरातर्फ कसैलाई चासो भएन। एक छेउमा उभिएर निशाले गन्‌गन् शुरु गरिन्। केहीबेरको गन्गन् नसुनेझै गरिराखेपनि 'हेर्ने पत्रिका नै हो, कसलाई पठाउनुपर्ने?' भन्ने प्रश्न आयो। 'पत्रिका के गर्ने हुन्छ त?' निशा अलिक चर्को स्वरमा बोल्न थालिन् 'जिल्लाको पत्रकार महासंघमा'। 'ए भनेपछि तिमी'नि पत्रकार?' निशा चुपचाप थिइन्। 'कुनमा काम गर्ने हो', के गलफत्ते गरिराख्नु भन्ने सोचेर निशाले एक शब्द फुत्काइन् 'फ्रिलान्सर'।
'बसौ न, एक्कैछिनमा हुन्छ काम, त्यत्तिन्जेल चिया खादै गर्नु', कुर्सीमा बस्ने इशारा गर्दै 'त्यत्ति जाबो कामको लागि किन उता गाको नि, हामीलाई राम्ररी भनेको भए भइहाल्थ्यो नि'। निशा छक्क परिन्। अन्जानमै पत्रकार भन्ने स्वीकारेपछि एक्कासी उनीहरुको रवैया बदलियो। 'नेपालका महिलाहरु किन ब्याक? बैनीले हेर्नुभो होला नी, एउटा च्यानलमा नाम चलेको पत्रकारले खुलेआम नेपाली महिलालाई नराम्रो भन्यो' अगाडि थप्दै 'एउटा विदेशीलाई- तपाई भाँडा माझेपनि, फटाही गरेपनि नेपाल आएपछि नेपाली केटीको लाइन लाग्छ- भन्यो। हाम्रो चेलीबेटीलाई त्यस्तो भन्ने हो?' अर्को टेबुलमा बस्नेले थप्यो 'उसैको दिदीबहिनीलाई पछाडि लगाओस् न'। निशा चुपचाप सुनीरहेकी थिई। 'खै त यस्तो कुरामा तपाईहरु जस्ताले लेखेको? बोलेको' निशातर्फ कुरा सोझिन्छ। 'शोभराज र निहिताको प्रसङ्गमा निस्केको कुरालाई कत्ति तन्काइराख्ने?' निशाको प्रतिप्रश्नले कुराको बिट मर्ने काम गर्छ।
तयार भएको बिल हातमा लिएर पैसा तिर्छे निशा। चिया आइपुग्छ। चिया खाने अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार्दै चिया हातमा लिएर 'फुरुरु फुरुरु' फुक्दै मनमनै फिसिक्क हाँस्दै भन्छे 'म'नि पत्रकार'। 'पत्रकार' दिमागमा यही शब्द खेलाउँदै सुरुप सुरुप चिया पिइसक्छे अनि बिदाबरी भएर एयरपोर्टबाट बाहिरिन्छे।
Posted by कैलाश at 9:40 AM 8 comments Links to this post
रामैरामको दाबेदारीले ल्याएको खुशी
एउटा सानो कामको शिलशिलामा नागरिक समाजको आन्दोलन या क्रियाकलापमा सक्रिय रहँदै आएका एकजना दाइ (विमल)सँग फोनवार्ता भयो। निकै रौसिएका अनि उनको खुशी उनको आवाजमा प्रष्टै बुझिन्थ्यो। उनी भन्दैथिएः 'कैलाश गज्जबै भयो नि।' के भएछ त अब भन्दै म पनि रौसिदै कान ठाडो पारे। 'राष्ट्रपतिको लागि मधेस/तराईबासीकै मात्रै नाम परेको छ, अब जसरी पनि हाम्रै चुल्होको पर्ने भो नि'। पहिले जनकपुरवासी भएकोले पनि उनले आफ्नै चुल्होको भनेर भन्दैथिए। राम शब्दसँग जोडीएको नामः रामराजा प्रसाद सिंह, रामबरण यादव, रामप्रित पासवान लगायतका व्यक्तिहरु गणतन्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको लागि सिफारिस गरिएपछिको उनको प्रतिक्रिया थियो त्यो। उनको त्यो खुशीको अगाडी मेरो कामको कुरा केहीछिन विलायो। ती दाज्यैको खुशी र उमंगको दृश्य देख्न नपाएपनि देखेँजत्तिकै लाग्यो।
लगातार बोल्दै गए उनी 'उपराष्ट्रपतिमा पनि समावेशीकरण हुने भो नि कैलाश'। उनको आशय, उपराष्ट्रपतिको लागिसमावेशीकरणको खाकाअनुरुप सँधैजसो खर्रर मुखमा भट्टाइने गरेको दलित, महिला, मधेसी, जनजाति कै दाबेदारी देखिनुमा थियो। शान्ता श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला र जनजाति, मानबहादुर विश्वकर्मा दलित अनि परमेन्द्र झा मधेसी समुदायबाट उपराष्ट्रपति पदको लागि चुनेन नामहरु छन्। उनी भन्दै थिए अझ रौसिदैः 'अब भोज त खानैपर्ने भो, नागरिक समाज, समावेशीकरण भन्दा भन्दा कमसे कम यत्ति त सुन्न पाइयो नि आज'।
उनको खुशीको सीमाना नै देखिन मैले। भनिन्छ नि खुशी बाँड्दा बढ्छ, दुःख बाँड‍दा घट्छ। उनको त्यो खुशी एकैछिनमा मेरो आसपास पनि देखियो। म उनीसँगै फोनमा बोल्दै थिए वल्लो कोठा पल्लो कोठाका साथीहरु एकअर्कामा 'बधाई' भन्दै धाप मार्न थाले। मलाई पनि खुशी हुँदै सुनाउँदै थिए। मेरो एउटा कान फोनमा सुनिएको खुशीको ध्वनीमा थियो भने अर्को कान चाहिँ छेवैमा आएर खुशी बाँड्ने साथीको हर्ष र उमंगतिर थियो। उता फोनबाट आवाज आउँदै थियो 'म भोली त्यहाँ आउँछु अनि यसैको उपलक्ष्यमा हामी मिलेर खानुपर्छ है'। मैले फोन गर्नुको कारण बताउँदा मजाले भनिदिएः 'यस्तो खुशीको बेलामा के त्यस्तो काम नि, पख न, भोलि भेटेरै कुरा गरौला नि त्यसबारेमा'। यता साथीहरु भन्दै थिएः ए! ल दाम्मी भएछ है। जसो गरेपनि एकजना न एकजना त पर्ने नै भयो। अर्कोले झन् ठूलो स्वर पार्दै थप्दै थियोः उपराष्ट्रपतिमा पर्को नाम पनि पो गज्जब छ त।
सबैजना एउटै कोठामा बसेर एकअर्कालाई बधाई दिँदै, थाहा पाएजत्ति कुरा भन्दै अनलाइन न्यूज हेरौ न भन्दै झुम्मिए। म चाहिँ बसे उनीहरुको खुशीलाई थोरै भएपनि कुटीमा छर्ने मनसायले। म चुपचाप बसेको देखेर एकजना साथी जोशिदै आएर तर्सिने गरी मलाई भनेः 'तिमी चाहि किन चुपचाप यहाँ कत्रो कत्रो कुरा भइसक्यो'। मैले ब्लगमा लेखीसक्दा सम्म अगाडी आएकामध्यै अबको राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपति 'को होला' र 'को हुनुपर्छ' भन्ने बारेमा चिया खाँदै गफिन चिया पसलतिर लागिसके। अहिलेलाई खुशीले फुरुङ्‌ग मन बोकेर म चाही लागे कोठातिर। अनि किचनतिरको पदभार सम्हाल्नु पर्ने पनि त छ नि, मैले । लौ अब हेरौ यो खुशीको आयू कस्तो हुने हो?
Posted by कैलाश at 5:54 PM4comments Links to this post
नीर्जिव ढुंगाहरुमा लुकेका किराती कथाहरु
निर्जीव ढुंगैढुंगाहरुमा लुकेको किराँती लोककथा हेर्दै जाँदा रमाइलो लाग्यो मलाई। । हुन त म गहिरो रुपमा अध्ययन गर्न रुचाउँने जमातभित्रको मान्छेमा पर्दिन। त्यसैले मैले यो लोककथा संग्रहबारे कुरा गर्नको लागि 'पढि टोपल्दा' भन्ने लेवल लगाइदिएको छु। र आज त्यही कथाहरुको बारेमा गफ ठाकौँ भन्ने मन भो। नेपालको पूर्वी भेग पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, खोटङ, ईलाम, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लाहरुमा विभिन्न आकार र स्वरुपमा रहेका ढुंगाहरुसँग जोडिएका चाखलाग्दा लोककथाहरुको संग्रह हो 'कथा ढुंगैढुंगाको'। जसलाई शुभ मुकारुङले पुस्तकको आकार दिएका छन्।
सो संग्रहमा किराँतीहरुको पूर्खाको इतिहासलाई दन्त्यकथाको रुपमा पुस्तौपुस्ता हस्तान्तरण गर्ने 'चिनो'को रुपमा रहँदै आएका ती ढुंगाहरुको तस्बीरसहितको १५ वटा कथाहरु छन्। जसमा १४ वटा ढुंगाहरु माथी भनिएका विभिन्न जिल्लाहरुमा छरिएर रहेका छन् भने एउटा ढुंगा सर्वसाधारणको लागि अदृश्य तर बराहक्षेत्र नजिकैको त्रिवेणीः अरुण, तमोर र दूधकोशीको सङ्‌गमस्थल,मा रहेको भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यस ढुंगाको सहायताले किराँती मुन्धुम जान्ने नाक्छोङ (बिजुवा), जो चाहि विशेषागरी चावामाङ (खोलादेउ)जान्दछ, हरुले खोला तर्ने गरेको भन्ने जनविश्वास रहेको भन्ने पढ्दा मेरो बाल्यकालमा एकजना गोठाला दाइले सुनाउनुभएको कथाको याद आयो। जुन कथामा मुन्धुम जान्ने बिजुवाले अरुण नदीलाई एउटा सिन्कोमाथि चढेर तरेका थिए रे भन्थे। कत्तिको साँचो हो कुन्नी?
यस संग्रहमा आकाशबाट झरेको ढुंगा, भालु ढुंगा, तान बुन्ने ढुंगा, बिजुवानी ढुंगा, जन्ती ढुंगा, खमाही ढुंगा, मृतात्मा ढुंगा, सुगूर ढुंगा, अजिङ्‌गरे ढुंगा, बूढबूढी ढुंगा, आरान ढुंगा, टोपी ढुंगा, डण्डीबियो ढुंगा, गुलेली ढुंगाहरुसँग जोडिएका रमाइला कथाहरु छन्। जे होस् यो किताब पढ्दाखेरी मलाई अल्छी लागेन। नत्र अन्य कतिपय किताब पढ्दा खास गरी कोर्सको किताब पढ्दा त एक अनुच्छेद पढ्न नपाउँदै आँखा तिरमिरतिरमिर भइ निद्रा पो लाग्न थाल्छ।
पढ्दा मज्जा आको कुराको केही भाग भएपनि छोटोमा राख्छु है म। नत्र नाम मात्रै सुनेझै लाग्छ पढ्नेमान्छेलाई।
नाम्धा लुङ -आकाशबाट झरेको ढुंगा- उहिले किराँती राज्य हुँदा किराँतीहरु आफ्ना भाषा, संस्कृति, रहनसहन, धर्मलाई बेवास्ता गर्दै मात्तिए/पात्तिएछन्। पारुहाङ (मैले कतै पढेअनुसार जसलाई शिवजीको किराँती रुप पनि भन्ने गरिन्छ क्यार)ले भेष बदलेर उनीहरुलाई शिक्षा दिँदा पनि पत्याएनन्। अनेक गरी सम्झाउदा पनि किराँतीहरु सुध्रेनन् अनि जोगीको रुप धारण गरेर शिक्षा बाँड्न थाले। त्यसो गर्दा पनि टेर पुच्छर नलाएपछि चमत्कार गरेमा टेर्लान् भनेर पारुहाङले ढुंगा झारेछन्। त्यो ढुंगा भोजपुरको अन्नपर्ण गाविस-2 मा रहेको छ।
घोल्टोङ लुङ -भालु ढुङगा- सुम्निमाका ४ छोरोहरु बाघ, भालु, बाँदर र मान्छे मिलेर शिकार खेल्न गए। एकअर्काबीच खाजा खाने निहुँमा झगडा परेपछि सुम्निमाले जसोतसो सुल्झाउँछ। तर आफू स्वतन्त्र हुने सूरमा उनीहरु एकअर्काको ज्यान लिन पनि पछि पर्दैनन्। बाघले आफु स्वतन्त्र घुम्नकै लागि आमालाई मारिदिन्छ अनि आमाको लाशलाई भालुले खाइदिन्छ। त्यसपछि भालु ढुंगाको ओढारमा गएर बस्छ। मान्छे केही स‍ंयम र बुद्धिमानी भएकोले घरजमतिर लाग्छ। भालुले ओढार गरेर बसेको त्यो ढुंगा इलाम नगरपालिकाको पश्चिमी भेगमा रहेको छ।
डाक्खाम लुङ -तान बुन्ने ढुंगा- किराँती किम्बदन्तीका पौराणिक दिदीबहिनी तयामा र खियामाका एउटा भाइ सानैछँदा टुहुरा हुन्छन्। विभन्न कष्ट गर्दै बाँचीरहेका हुन्छन्। भोजनको खोजीमा गएको बेला भाई बेहोशी हुन्छ। त्यही बेहोशीलाई मरेको ठानी दिदीबहिनी भाईको वियोगमा पर्छन्। अनि दुईजना आ-Aफ्नै सूर गर्नतिर लाग्छन्। छुट्टिने बेलामा भाइ नाममा १,१ वटा फूल रोपेर हेरचाहको लागि कहिलेकाहीँ आउने र फूल ओइलाएको भए अशुभ मान्ने वचनका साथ छुट्टिन्छन्। तयामा फूल हेर्न आउँदा खियामाको फूल ओइलाएको देखी खोजी गर्दा मरेको हड्डीकुड्डी भेट्छिन्। त्यही हड्डीकुड्डीलाई बाँसको ढुङ्ग्राभित्र खरानी पानीमा डुबाइ तयामा तान बुन्न थाल्छिन्। तानमा खियामा आकृति बनाउँदै मुन्धुम गाउँदै जाँदा आकृतिको बनावट पूरा हुनासाथ खियामा पुनर्जिवीत हुन्छिन्। खोटाङको मालाथुम्की डाँडामा तयामा तान बुनेको केही चीजबीजहरु भेटिने र त्यही चुचुरोमा रहेको ढुंगामा तान बुनेको कुरो पढ्न पाइन्छ।
भः लुङ -सुँगुर ढुंगा- उहिले खोटाङ र सोलुतिर मात्रै साङपाङहरु थिए रे। एकदिन साङपाङ राईहरुको सुँगुर गाउँबाट भाग्यो। गाउँलेहरु सुँगुरको पछिपछि लागे। भाग्दै जाँदा फली ढुंगामा पुगेपछि सुँगुर गायव। सुँगुर नलिइ नफर्कने जिद्धीमा उनीहरु असफल भए अनि त्यतै बसे। सो ढुंगा भोजपुरको साम्पाङ गाविस- ४ मा रहेको छ।
धियाङपुछाप लुङ -अजिङ्‌गरे ढुंगा- भोजपुर र खोटाङको सीमानामा रहेको भुते दहमा एउटा ठूलो अजिङ्‌गार थियो। त्यो दह आसपास जो गएपनि खाइदिने। गाउँमा आतंक मच्चिएपछि तन्त्रमन्त्रद्वारा एउटा लामाले ७ दिन ७ सात लगाएर अजिङ्गरको एउटा आँखा फुटाए। त्यसपछि अजिङगर भोजपुरको इर्खुवा खोला हुँदै भाग्दै अरुण नदी हुँदै सङ्‌खुवासभाको पिलुवा किनारमा बस्यो। त्यहाँ पनि आतंक मच्चाएपछि छेन्दिमुख र बीरमुख नाम गरेका दुईजना व्यक्तिले ७ दिन ७ सात धामी बसेर अरुण नदीमा ठूलो बाढी बगाए। अजिङ्गर घाम ताप्न बाहिर निस्केको बेला पारी छेन्दिमुखले मुन्दुमद्वारा बज्र खसाए। बज्र लागेपछि अजि्ङगर मर्यो र ७ दिन सातै रात अरुण नदीमा रगतको खोलो बग्यो। अजिङ्‌गरे ढुंगा सङ्खुवासभाको पिलुवा भन्ने ठाउँको अरुण नदीको किनारमा रहेको छ। यो पुस्तकको आवरण तस्वीरको रुपमा सोही अजिङ्गरे ढुंगालाई राखिएको छ।
अन्य ढुंगाहरुको बारेमा पनि यस्तै यस्तै रोचक प्रसङ्‌गहरु रहेका छन्। जसले गर्दा मलाई किराँति लोककथाहरुबारेमा बुझ्न रमाइलो 'मुड' दियो। त्यसैले पढ्ने बानी राम्रो हो तर पढ्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो भन्ने पनि सोरै आना ठीक मान्छु।
Posted by कैलाश at 3:43 PM3comments Links to this post
Labels: पढि टोपल्दा
ढिडो र लोकल कुखुराको स्वादमा शनिबारे छुट्टी
कम्प्यूटर बिग्रेको अनि अल्छी लागेकोले पनि मैले कुटीभित्र नयाँ चिज राखेको थिइन। अब कम्प्यूटर पनि बन्यो अनि के लेखौ भनेर गम खाँदा त शनिबार गाउँमा गएर ढिडो र स्वादिलो लोकल कुखुराको मासु खाएको कुरा पो दिमागमा क्लिक भयो। ओहो मुखमा पानी नै आयो नि।
एकजना साथीसँग गएको शनिबारको बिदा मनाउँने निहुँमा दक्षिणकाली मन्दिर छेउको 'छैमले'तिर हुईकियौ शुक्रबारकै बेलुकी। त्यहाँ आफन्तहरु रहेकाले हामीलाई सजिलो भयो। पेट्रोलको अभाव भएकोले गाउँसम्म गाडी नजाने हुनाले दक्षिणकाली मन्दिर छेउको बस स्टपमा उत्रिएर उकालो लाग्यौँ। त्यहाँबाट ४५ मिनेट जति हिड्दा झमक्कै रात पर्यो। आफन्तहरुकोमा पुग्यौ। आँगनबाट यसो नजर घुमाउँदा ललितपुर र काठमाडौको केही भागमा झिलिमिलि बत्ती देखिन्थ्यो। अहो ! साह्रै राम्रो। खानपिन गरियो सुतियो।
शनिबार विहान उठेर यसो आँखा र ज्यानलाई कसरत गराउँदै अलिअलि घुमियो। बारीमा हेर्दा काक्रो, मकै, फर्सीको लहरा जस्ता कुराहरुले मनै फुरुङग हुने। हेर्दैखेरी टपक्क टीपेर कर्याम्म टोकीहल्नु जस्तो। त्यहाँ ९ रुपैयाँ किलो रहेछ। शहरमा आइपुग्दासम्म बासी र ओइलाएकै सही २५/३० रुपैया किलो त पुगी नै हाल्छ। आफुले पनि त्यस्तै किनेर खाने हो। खैर, अगाडी जाऔ- घर छेवैको सिस्नु घारीमा गएर सिस्नु पनि टिप्यौ हामीले। तर त्यो चाहि आफ्नै कोठामा ल्याएर खायौ है हामीले।
विहानको लागि गज्जबको खान्की। सँधै त कुन्नी तर कहिलेकाही मकैको ढिडोलाई लोकल कुखुराको graby तरकारीमा चोब्दै क्वाप क्वाप गाँस हाल्नुको स्वादै बेग्लै नि हौ। हुन त चामलको भात, दात, तरकारी पकाइएको थियो र पनि लोकल कुखुराको तरकारीसँग ढिडो खाने सबैको रुचिले फेरी ढिडो पाक्यो। अनि मजाले खाइयो। त्यसपछि केही बेर गफगाफ अनि यताउती अल्याङटल्याङ गरेपछि दिउँसोतिर शहर फर्कने सूरमा लाग्यौ। थोरै भएपनि गाउँको ताजा र हरियोपरियो तरकारी झोलामा खाँदखुद पारेर बाटो लाग्यौ हामी। अघिल्लै दिनदेखि पानी परेको अनि आजकालको फेन्सी चप्पलको छोटो आयु हुनाले साथीको चप्पलले आधा बाटो अनि 'गलत ट्यम'मा धोका दियो। केही बेर हिडेपछि पसल भेटियो अनि त्यहाँ नयाँ चप्पलको छनौट भयो।
हिड्दाखेरी साथीको चप्पल चुँडिएपछि बाटोमा रु. १५० को नयाँ चप्पल मिलाउँदै गर्दा त्यतैतिर मैले क्यामेर सोँझ्याए। अनि दक्षिणकाली मन्दिर त आइयो तर मान्छेको हूलले गाडीमा सिट थिएन। अनि त खलासीले गाडीको छटमा चढ्ने सल्लाह दियो। हामी पनि ज्ञानी भएर चढ्यौ। गर्मीमा गाडीको छटमा बसेर हावा खाँदै परपर सम्मको दृश्यहरु हेर्दै शहरको प्रदुषित तर महँगो हावा खाने चक्करमा फेरी होमियौ। अनि शनिबारको छु्ट्टी खत्तम। ढिडो र स्वादिलो लोकल कुखुराको स्वाद भने जिब्रोमा अझै छ क्यार। लौ त जय भुँडी।
Posted by कैलाश at 1:45 PM2comments Links to this post
Just havealook 'The Wonder'
This is amazing tree named "Nareepol" in Thai. Naree means "girl/woman" and pol means plant/tree or"buah" in Malay. It means women tree. It is amazing what God create the World in many forms that amused human beings...
It's real tree @ Petchaboon province about almost 500 kms away from Bangkok.
Wow!! WhataTree yaar !!! It seems like the women are hanging asafruits.
Let's come to close to see the fruiting the tree, such asastrange things.
Let's come to more closer to see the women, produced by the Tree "Nareepol". What to say for Creature...
So friends... After seeing this pictures, What do you say ...
At the end, i just have to say thank you for the person, who mailed me suchapicture. Haveafun time guys.
Posted by कैलाश at 12:15 PM9comments Links to this post
Labels: आम्मैः यस्तो पनि
Get the look- 'The Nature' !
अहिले काठमाडौमा जता हेरेपनि फोहोरैफोहोरको डंगुर छ। निकै दिन भइसक्यो उठाउने कुरा चलेको। तर अझै ज्यूँका त्यू छ फोहोर। दिनदिनै त्यही फोहोर सुङ्‌दै-हेर्दै हिड्दाहिड्दा मलाई हरियोपरियो, मनमोहक दृश्य हेर्न मन लाग्यो। रमणीय स्थानमा आनन्दसँग केही बेर भएपनि बस्न मन लाग्यो। तर भनेजस्तो कहाँ हुन्छ र हैन? त्यसैले पहिले घुमिएका केही ठाउँहरु र त्यहाँका मनोरम प्रकृतिसँग रमाउँदै खिचेको तस्बीरहरुबाटै चित्त बुझाउने उपाय गरे। अनि कुटीमा ठेलीदिए केही तस्बीरहरुलाई। लेख्न पनि खासै मन लागेको छैन। त्यसैले 'टिरिक' लगाएको नि।
पर्यटकीय स्थल 'बन्दीपुर'को डाँडोबाट तलतिर नियाल्दाको दृश्य।
दोलखाको चरिकोट पुग्ने बेलाको 'चर्नावती' खोलामाथीको पुलमा बसेर छङ्छङ् बगेको सफा पानी हेर्दाको आनन्द, आह...।
ललितपुरको विशंखुनारायण मन्दिर छेउको सल्लाघारीको डाँडोमा सल्लाको सिर्रसिर् हावामा आरामले सुतेर आकाशतिर हेर्दाको क्षण।
ललितपुरको लुभु हुँदै उकालो उक्लेर लखतरान भा'बेला लाकुरीभञ्याङको डाँडामा सुस्ताउँदै Mount Everest हेर्दाको रमाइलो क्षण।
धुलीखेलबाट दोलालघाट जाने क्रममा बाटोमा कफीसँगै रमाउँदा पारीपटि देखिएको पाँचखालको भूभाग।
अब धेरै नहेरौ है? नत्र धेर खाँए चिनी पनि तीतो हुन्छ भनेझैँ होला फेरी। के विचार भो त अब? जाने हैन त तपाईहरु पनि आन्तरिक पर्यटनको मजा लिन?
Posted by कैलाश at 5:30 PM3comments Links to this post
Labels: भ्रमण- तस्बीर